Trafika-na « bois de rose » : 1 770 Miliara Fmg -
AccueilRaharaham-pirenenaTrafika-na « bois de rose » : 1 770 Miliara Fmg
06/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy mahagaga raha misy manam-pikasana mafy hiverina eo amin’ny fitondrana hanadiovana ireo raharaha maro misokatra momba azy amin’ny resaka fanondrana na « bois de rose », fandikan-dalàna ara-bola, famotsiam-bola ary harena azo amin’ny tsy marina.
Hita ao amin’ny tranonkalan’ny SAMIFIN araka ny tatitra 2017 navoakany (http://www.samifin.mg/sites/default/files/rapportannuel/rapport_annuel_2017.pdf) ny raharaha Panama Papers, izay nilaza mazava ny fisian’ny famotsiam-bola tamina fanondranana “bois de rose” nataona mpandraharaha malagasy iray nandritra ny Tetezamita. Mahatratra hatrany amin’ny 1 770 Miliara Fmg ny vola tamin’izany fanondranana “bois de rose” izany, ary nividianana trano lafo vidy sy mijoalajoala maro. Niainga avy amin’io ampamoaka nataon’ny Panama Papers io araka izany ny fanadihadiana nataon’ny SAMIFIN ka nahafahana nitsirika ireo fandikan-dalàna vitan’ity mpandraharaha ity. Nivoaka tamin’izany rehetra izany koa ny adiresy maro, raha tsy hiresaka afa-tsy ilay orinasa mpividy “bois de rose” nifampiraharaha tamin’ilay mpandraharaha navoakan’ny Panama Papers ary zao jerena ao amin’ny adiresy tranonkala “https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12095291 ».
Voalaza ao amin’io tatitry ny SAMIFIN io fa nisy “notable” iray namoaka ampahibemaso ny taona 2012, raharaha fanondranana “bois de rose” mahakasika mpandraharaha iray manana irony orinasa misahana ny fanondranana entana irony (société de transit), mifandraika amin’ny ampamoaka nataon’ny Panama Papers. Nitory ity “notable” ity ilay mpandraharaha tamin’izany fotoana ho nanao fanalam-baraka imasom-bahoaka.
Rehefa nijery sy namadibadika ny tahirim-baovao rehetra mikasika izany fitoriana “notable” amina resaka fanondranana “bois de rose” ny taona 2012, ary mifandraika amin’ireo anarana folo navoakan’ny Panama Papers ny teto amin’ny gazety dia tsy nahita afa-tsy ny raharaha Zakariasy. Marina tokoa, notanana am-ponja vonjy maika ny faha-13 Novambra 2012 tokoa ity tangalamena ity taorian’ny fandalovany teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana.
Tsy nisy afa-tsy mpandraharaha iray amin’ireo folo nambaran’ny Panama Papers no nitory olobe na “notable” na tangalamena noho ny resaka “bois de rose” teto ny taona 2012, dia i Mamy Ravatomanga izany.